LandViewer: falanqaynta sawirada sawir-baadhista Earth waqtiga dhabta ah ee laga helo barta internetka - Geofumadas
Ogast, 2017 Featured, Geospatial - GIS, tabo cusub
Saynisyahannada xogta, injineerada GIS iyo horumarinta software EOS, oo ah shirkad fadhigeedu yahay California, ayaa dhawaan samaysay qalab wax ku ool ah oo daruuri ku dhisan oo u oggolaanaya dadka isticmaala, saxafiyiinta, cilmi-baarayaasha, iyo ardayda inay raadiyaan oo ay falanqeeyaan tiro badan oo ah xogta ugu muhiimsan ee la socoshada Earth.
LandViewer waa adeegga wax-qabadka sawir-qaadashada iyo falanqaynta oo bixiya:
helitaanka deg dega ah ee dukumintiyada cusub iyo xogta xogta;
suurtogalnimada helitaanka sawirrada geospatial ee cabir kasta oo leh laba farood, adoo dooranaya aagga aad rabto ee khariidada ama magaca goobta;
falanqayn sawir ah waqtiga dhabta ah, iyada oo xulashada soo dajinta sawirrada la rabay ujeedo ganacsi.
xal EOS awood u isticmaala si ay u qabtaan wadatashiyo badan, ka heli oo ay isticmaalaan image mid ka mid ah Dhulka satalayt dhawrid Sentinel ka Landsat 2 8 la heli karo iyo in hal meel oo ka dhakhso badan ka hor. Waa adeeg bilaash ah, oo sahlan in la isticmaalo, kaas oo laga heli karo barta internetka ama qalab kasta.
Thanks to LandViewer, dadka isticmaala waxay sahmin karaan Sentinel 2 iyo Landsat 8 rakibaadyo lagu kaydsan yahay bogga Amazon Cloud, codsan filtarrada raadinta taariikhda sawirka, daboolka daruuraha ama qorraxda kaca, falanqee sawirada, soo dejisan iyo la wadaag kuwa kale.
By mosaics jiilka technology, goobaha LandViewer soo kaban karaa file xogta la kordhiyo wax ka yar 10 seconds. Sawirada waxaa lagu arki karaa isku dhafan kala duwan ee kooxo ama taxane muuqaal ah waqtiga dhabta ah sida NVDI, oo loo xushay inay soo bandhigto macluumaadka sida ugu habboon baahida loo qabo isticmaalaha. Si aad u samayso tani suurtogal ah, khubaro EOS yeelatay technology in isbedel-waqtiga dhabta ah sawirka xogta satellite cayriin kaydiyaa format GeoTIFF 16 tesserae yara, user isla markiiba ka arki kartaa in suuqa kala browser ah . Ma aha lagama maarmaan in la abuuro oo lagu kaydiyo daaqadaha hore ee shabakada ama si loo xajiyo xogta, maaddaama sawirada si dhakhso ah loogu soo bandhigo barta shabakadda xogta aasaasiga ah.
user The codsan kartaa gaynta kala duwan ee guutooyinkiisa oo spectral preinstalled iyo kartoo si loo muujiyo oo soo bandhigay xog ka image kasta. Tusaale ahaan, dabka kaynta ayaa si fudud ugu muuqan kara qaybta infrared. Waxaa jira kooxo badan oo la heli karo si loo falanqeeyo dhirta, dhulka beeraha, barafka, barafka, harooyinka iyo badda. Users isticmaali kartaa oo dhan walxaha in goobta a, tusaale ahaan, kuwa la xiriira dabka, daadad, dhul beereedka sharci-darrada ah iyo maamulka khayraadka biyaha si faahfaahsan. waxa kale oo aad is barbardhigi kartaa images chronologically geospatial of 2014, 2015, 2016 iyo 2017 ogow isbeddelka ka dhacay horumarinta riverbeds, kaymaha iyo walxa kale oo dabiici ah.
Bishii Febraayo 2017, geoscientists reer binu Israa'iil loo isticmaalo LandViewer ee cilmi-baarista iyo soo saaraha dayax-gacmeedka ee dhajisey baqshiinka si loo abuuro khariidadda X-X ee MN ee maraakiibta Carbeed. Khubarada GIS ayaa sidoo kale sameyay baadhitaano lagu sameeyo bacriminta biyaha biyaha gacmeed iyadoo la adeegsanayo sawirada ugu fiican (ma jiro mowjo, jawi nadiif ah, muuqaal wanaagsan oo ah qubayska dhabta ah, iwm) oo laga heli karo LandViewer.
"2017, EOS waxay ka tarjumaysaa suuqyada bulshada iyo ganacsiga bini'aadamka ee adduunka," ayuu yidhi aas aasaha shirkadda EOS Maxamuud Polyakov. Xaqiiqdii, shirkaddu waxay leedahay tiknoolajiyada ugu awoodda badan ee sawirka fog fog ee sawir-qaadista, halka bakhaarada EOS ay xog ururinayaan xogo badan oo kala duwan: gawaarida, hawada iyo gawaarida aan cirka lahayn. Hadda ka dib, dadka isticmaala waxay heli karaan teknoolojiyada cusub ee falanqaynta sawirada iyadoo lagu saleynayo dariiqa, hababka ku saleysan shabakadaha neerfiga, dariiqa daruuriga ah - sawirada sawirada, isbeddelista, iyo jiilka.
Isku day LandViewer ama la xiriir kooxda si aad u hesho macluumaad dheeraad ah: info@eosda.com
Post Previous«Previous Sax Cadastral Ujeedada tiirsan - arrimuhu, YAQINSAN, farsamo ama micne lahayn?
Post Next Paste isbiriidhshiit ah oo wuxuu galay AutoCAD, taas oo si toos ah u cusbooneysiinNext »
2 Jawaab in "LandViewer: falanqaynta muuqaalka sawir-baadhista Dunida waqtiga dhabta ah ee kaamarkaaga"
Trần hùng isagu wuxuu leeyahay:
RAT Quang trọng quản rajeeyaa động cho hoạt waceen, nhưng dịch cho Han Che VU mien PHI, karaa cho mien PHI MO RONG đe wada Ban Nhung Van
zoilo isagu wuxuu leeyahay:
Dukumiintiyadan aad u xiiso badan ee shaqada xirfadlayaasha ee Geologist